Fanafihana tany Toamasina :: Maty voatifitra ny mpamily tsy nety nitondra jiolahy nandositra • AoRaha
Fanafihana tany Toamasina Maty voatifitra ny mpamily tsy nety nitondra jiolahy nandositra
Nisehoana fanafihan-jiolahy nitam-basy tany an-tampon-tanàn’i Toamasina, omaly antoandro. Nanakana fiara nokasaina hoentina handosirana ireo jiolahy. Tsy nety nitondra ny fiara anefa ilay mpamily ka notifirin’izy ireo. Maty tsy tra-drano teo izy.
Nisy ihany koa ny fifampitifirana teo amin’ireo olon-dratsy sy ny mpitandro filaminana. Naratra voatifitra ny polisy iray sy jiolahy iray. Efatra hafa tamin’ireo mpanafika no azo sambo-belona. Tafaverina amin’ny tompony ny vola roapolo tapitrisa ariary sy ny firavaka volamena voaroba.
Olona nitondra vola tao anaty kitapo no lasibatra tamin’ity fanafihana ity. Nandeha posy, nandalo tsy lavitra ny banky, io olona io no notratrarin’ny andian-dehilahy nirongo basy. Efa nokendrena sy fantatr’izy ireo mialoha ny fisiana volabe teny aminy.
Tetsy an-kilany, nisy nampandre haingana ny polisy avy ao amin’ny Kaomisaria Tanambao II. Tonga ara-potoana iretsy farany ka nisy ny fifandonana mahery vaika teo amin’ny roa tonta. Naharitra minitra vitsy ny fifampitifirana.
“Voatifitra teo amin’ny sandriny ny polisy iray. Voa teo amin’ny tongony kosa ny iray tamin’ireo mpanafika. Nosakanan’ireo jiolahy ihany koa ny fiara iray sendra nandalo ary nasaina nitondra azy ireo hitsoaka. Notifirina ny mpamily rehefa tsy nanaraka ny baiko. Noraisim-potsiny teo ireo olon-dratsy”, araka ny tatitra avy amin’ny polisy any Toamasina.
Fotoana vitsy taorian’ny fisamborana no nanaovana famotorana an’ ireo voasambotra. Fantatra fa vao avy nivoaka ny fonja tany Ihosy ny iray tamin’izy ireo.